အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - - SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မ 2nd နှစ်ပတ်လည်အလုပ်ရှာဖွေရေးနေ့အိမ်ရှင်အဖြစ် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မ 2nd နှစ်ပတ်လည်အလုပ်ရှာဖွေရေးနေ့အိမ်ရှင်အဖြစ်
SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မ 2nd နှစ်ပတ်လည်အလုပ်ရှာဖွေရေးနေ့အိမ်ရှင်အဖြစ်
Los Angeles - တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတလွှားကနေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ 27 မှာမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်ဧပြီလ2အပေါ်ရုပ်မြင်သံကြားအကယ်ဒမီရဲ့ Saban မီဒီယာစင်တာ၌တွေ့ဆုံသည်nd ကထုတ်လုပ်နှစ်ပတ်လည်အလုပ်ရှာဖွေရေးနေ့, ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မ SMPTE®, ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏အနာဂတ် defining သောအဖှဲ့အစညျး။ အဆိုပါနေ့ကရှည်ဖြစ်ရပ်မိန့်ခွန်း, စားပွဲဝိုင်းများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ကိုကမ်းလှမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များ, အလုပ်-ရှာကြံမဟာဗျူဟာများ, ရုပ်ရှင်ရုံကိုဖြတ်ပြီးနည်းပညာအစီအစဉ်များနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလမ်းညွှန်သင်ပြ, ရုပ်မြင်သံကြား, ဂိမ်းများနှင့် virtual reality နှင့်အတူ panel ကဆွေးနွေးမှုများပါဝင်သည်။ အဖြစ်အပျက်စပွန်ဆာပါဝင်သည် Dolby Laboratories, မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်က Epic Games ။
အလုပ်ရှာဖွေရေးနေ့သိပ္ပံ, နည်းပညာ, အင်ဂျင်နီယာ, အနုပညာနှင့်သင်္ချာ (ရေနွေးငွေ့) ဘာသာရပ်များလေ့လာနေဘွဲ့ကြိုနှင့်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများကိုရည်ရွယ်သည်။ တက်ရောက်တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ (USC), ကာလီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်အပါအဝင်တစ်ဒါဇင်တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားကျောင်းများမှကျောင်းသားများထည့်သွင်း Los Angeles မြို့ (UCLA), Loyola Marymount တက္ကသိုလ်နှင့် Claremont ကောလိပ်အဖြစ်အနုပညာ၏နယူးအင်္ဂလန် Institute မှအပါအဝင်ပိုပြီးဝေးကွာသောကျောင်းများတွင်။
"အလုပ်ရှာဖွေရေးနေ့အလုပ်အကိုင်များ, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမဟာဗျူဟာနှင့်လှုံ့ဆော်မှုသို့ key ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသူကိုစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူလူငယ်များဆက်သွယ်," ဟုပြောသည် SMPTE အလုပ်အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဘာဘရာ Lang ။ "တစ်ဦး 100 နှစ်အရွယ်အဖွဲ့အစည်းကအဖြစ်, SMPTE ရုပ်ရှင်များ, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဂိမ်းများ၏မှော်မှအရေးပါသင်္ချာအတွက်နောက်ခံ, သိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူပါရမီပညာရှင်များ၏နောက်မျိုးဆက်ကိုမှေးမွူထံအပ်နှံ၏။ "
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ရဲ့ပြောရမှာလိပ်စာများ VR ဒါရိုက်တာနှင့်လက်တွေ့ကို Magic နိုင်ငံတော်သမ္မတမဿဲ Lewis ကများနှင့်နည်းပညာရှင် / အင်ဂျင်နီယာ Josh Rizzo ဖြင့်ကယ်လွှတ်ခဲ့သည်။ Lewis ကအင်ဂျင်နီယာများဖန်တီးခြင်းအတွက်ကစားနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍဆွေးနွေးတင်ပြ ဟောလိဝုဒ် မှော်; Rizzo အစုလိုက်အပြုံလိုက်စျေးကွက်ဖျော်ဖြေရေး၏အသစ်တခုပုံစံအဖြစ်အီလက်ထရောနစ်အားကစားပေါ်ပေါက်ရေးမီးမောင်းထိုးပြ။ မှတ်ချက်ချ ", Matt နှင့် Josh, ပန်းခြံထဲက hit" SMPTE ဟောလိဝုဒ် ကုလားထိုင်ဂျင်မ် DeFilippis ။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ panel ကဆွေးနွေးမှုများစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်သိရှိခဲ့ကြသည်။ ငါသည်လည်းကျောင်းသားတွေနဲ့အတူများစွာကိုအံ့သြစရာတစျခု-on-one ပြောဆိုမှုများပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ အကြောင်း, နောက်ဆုံးမှာ, အလုပ်ရှာဖွေရေးနေ့အားလုံးအကြောင်းပါတယျ။ "
ဘရိုင်ယန် Wright ကမူ Max Edwards က Company ၏ဥက္ကဋ္ဌတည်ခင်းဧည်စုဆောင်းရေးဖိုရမ်, ဝေါ့ဒစ္စနေးစတူဒီယိုထဲကနေရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်များကိုအထူးကု, ထိုဝိဇ္ဇာကယ်လီဖိုးနီးယား Institute မှစဉ်အတွင်း J2 ဂလိုဘယ်နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများအလုပ်ရှင်များနည်းပညာ-related အလုပ်အကိုင်များရှာနေသောကျွမ်းကျင်မှုအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် panel ကိုအတွက်သင်တန်းသားများကို featured ဟောလိဝုဒ် Professional ကမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့လူငယ် Entertainment ကပညာရှင်များလမ်းညွှန်အစီအစဉ်။ "ဒါဟာဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအကိုင်းအခက်များတွင်အသုံးပြုသော Workflows အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ခဲ့," Biola တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား Megan ဖြစ်သူ Scott ကပြောကြားသည်။ "ငါသည်အလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထားပြီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်စတင် သာ. ကောင်း၏ပြင်ဆင်ထားခံစားရပါတယ်။ "
အထူးလက်ပေါ်မှာသရုပ်ပြထိုကဲ့သို့သောကွက်ကို, animatics နှင့် previs အဖြစ်ရိုးရာနည်းစနစ် supplanting ဖြစ်ကြောင်း Real-time visualization နည်းပညာများကိုပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစာရှောင်ခြင်းက rendering speed ကို exploit နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းဒါရိုက်တာများနှင့်ဇာတ်လမ်းပြောပြဘို့ကို real-time visualization များကိုပါဝါတွက်ချက်ထိုကဲ့သို့သောက Epic Games အားဖြင့် Unreal Engine ကိုအဖြစ်ဂိမ်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတအင်ဂျင်, ပါဝင်သည်။
ပါဝင်မှုဖြစ်လာတက်ရောက်သူကျောင်းသားအများအပြားနှင့်အတူနံပါတ်များနှင့်မတူကွဲပြားမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ 2018 ရဲ့နှစ်စင်းဖြစ်ရပ်ကျော်လွန်သွား SMPTE အဖွဲ့ဝင်များက။ "SMPTE ဒီဖြစ်ရပ်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတလွှားကနေအတူတူပညာရှင်များဆောင်ခဲ့အတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်, "ဘား Weiser သည် Entertainment ကစက်မှုပညာရှင်များဆရာမဟာမိတ်အဖွဲ့ (EIPMA) ၏သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောကြားသည်။ "သူတို့ကအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာပညာရှင်များငါတို့ရှိသမျှသည်ပျော်မွေ့ဖျော်ဖြေရေးထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရန်အများအပြားလက်မှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းဘယ်လိုကျောင်းသားများကိုပြသခဲ့သည်။ "
အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မ SMPTE® အစပိုင်းတွင် 1928 အတွက်အနောက်ကမ်းခြေပုဒ်မအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ် SMPTE တိုင်းဒေသကြီး, က 1,200 ထက်ပိုလွှမ်းခြုံ SMPTE သာ. အတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်နည်းပညာအတွက်ဘုံအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်များ Los Angeles မြို့ ဧရိယာ။ အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မမှပွင့်လင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလစဉ်အခမဲ့အစည်းအဝေးများကမ်းလှမ်း SMPTE ရောနှောအဖွဲ့ဝင်များနှင့် Non-အဖွဲ့ဝင်များက။ အစည်းအဝေးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြားရေးမှာပုဒ်မက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာတင်ထားလျက်ရှိသည် www.smpte.org/hollywood.
ပညာရေး အင်ဂျင်နီယာ စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များ SMPTE လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality	2019-05-16
ယခင်: InfoComm 2019: အသံလွှင့် Pix နယူးပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှု Switcher ကို, PTZ ကင်မရာထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ IP ကိုအလေးထားဖော်ပြသည်
နောက်တစ်ခု: ဂျယ်ရမီ Sawyer အလင်းသံကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည်